आज साँझ मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, केही महत्त्वपूर्ण निर्णय हुने - नेपालबहस
आज साँझ मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, केही महत्त्वपूर्ण निर्णय हुने
| १५:५४:३३ मा प्रकाशित
३ जेठ, काठमाडौं । आज साँझ मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदकाे नियमित बैठक साँझ ५ बजे बस्न लागेकाे हाे । आजकाे बैठक नियमित भए पनि केही महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन सक्ने बताइएकाे छ ।
सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार भइरहेको प्रयास लगायत स्वास्थ्य सामग्री, औषधी, खोप लगायत खरिदमा देखिएको कानुनी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउने सम्भावना रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिनअघि जनस्वास्थ्य विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा आएका सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर मन्त्रिपरिषद बैठकले केही निर्णय गर्न सक्ने बुझिएको छ।
बैठकले कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई अति शक्तिशाली र विशेष अधिकार दिने गरि अध्यादेश ल्याउने भएको छ । नेपालमा कोरोना जोखिम बढ्दै जाँदा र अस्पतालहरुमा अभाव र तनाव बढ्दै गर्दा सीसीएमसीलाई शक्तिशाली बनाउने गरि अध्यायदेश जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा लाग्ने समय र ल्याउने देश तथा निषेधाज्ञा लगायतका कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेर अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कानुनी अभाव र अड्चनका कारण कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रणमा समस्या आएको कुरा उठेको थियो । कोभिडसम्बन्धि कानुन संशोधन गर्नका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट भए पनि अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुविधा ? [ भिडियाेसहित ] ७ दिन पहिले
रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गर्नेदेखि उपप्रमुख हार्नेसम्मका मन्त्री, बाँस्कोटा र बस्नेत जिल्ल ! १ हप्ता पहिले
सबैलाई चक्मा दिंदै ओलीले गरे क्याविनेट विस्तार १ हप्ता पहिले
मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै ओली, गृहमा बस्नेतको दावी अरु को बन्दैछन् मन्त्री ? २ हप्ता पहिले
ओलीले चार जनाबाहेक एमालेका सबै मन्त्री हटाउने २ हप्ता पहिले
सत्ता प्राप्तिका लागि ठाकुर र महतोको दूतावासमा दौडधुप, रुक्मांगद कटवाल भारतीय दूतावासमा लुसुक्क ४ हप्ता पहिले
अब काठमाडौं उपत्यकामा बार अनुसार पसल खोल्न पाइने १८ मिनेट पहिले
चीनबाट अनुदानमा प्राप्त भएको भेरोसेल खोप २२६ पत्रकारले लगाए १९ मिनेट पहिले
आज थप २,४४२ जनामा कोरोना पुष्टि, ५१ संक्रमितको मृत्यु २८ मिनेट पहिले
पर्सामा असार १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी राखिने ३१ मिनेट पहिले
मेलम्ची बाढीः द्रुत आवश्यकता मूल्यांकन जरूरी ३२ मिनेट पहिले
स्थानीय तथा व्यवसायीहरु सुरक्षित स्थानतर्फ सामान सार्दै ३४ मिनेट पहिले
बाढीले पुरिएका सामान निकाल्दै स्थानीय र व्यवसायी ३७ मिनेट पहिले
नबिल बैंकको स्वामित्वमा रहेको स्वावलम्बन लघुवित्तको शेयर बिक्रीमा ४१ मिनेट पहिले
बाढीले आफ्नो घर खेत बगाएको ठाउँ हेदै वृद्ध ४४ मिनेट पहिले
मेलम्ची–हेलम्बु जोड्ने मोटर बाटो निर्माण जारी ५१ मिनेट पहिले
नेपाल चेम्वर अफ कमर्सद्धारा बाढीपीडितहरुका लागि राहत सामाग्री हस्तान्तरण ५५ मिनेट पहिले
उपत्यकामा निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने प्रशासनकाे तयारी १ घण्टा पहिले
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको सभाले पारित गर्यो ८ दशमलव ४२ प्रतिशत लाभांश १ घण्टा पहिले
निर्धारित समयमा पनि सकिएन खानेपानी आयोजना १ घण्टा पहिले
बाराको जगदम्बा कारखानामा आगलागी : २ मजदुरको मृत्यु, ३ घाइते ! १९ घण्टा पहिले
रुसमा जहाज धस्सिएर दुर्घटना: नौ जनाको मृत्यु १९ घण्टा पहिले
कांग्रेसमा बूढाकै हालीमूहाली ५ घण्टा पहिले
व्यासको तिङ्कर, छाङ्ग्रुमा सात महिनादेखि स्काई टावर अवरुद्ध, फोन सेवा सञ्चालन अनिश्चित ८ घण्टा पहिले
लगातारको वर्षाले एक पक्की घर भत्कियो ६ घण्टा पहिले
राष्ट्रपतिको खोप कुटनीति निश्प्रभावी, धेरै राष्ट्रले पत्रको जवाफ समेत फर्काएनन् ४ दिन पहिले
गीत गाउँदै, कुल्फी बेच्दै ‘पाकिस्तानी डोनल्ड ट्रम्प’ ! २३ घण्टा पहिले
गर्भवतीलाई नगरपालिकाको पोसिलो खाना उपहार ६ दिन पहिले
आज थप २८२८ जनामा संक्रमण पुष्टि, ५२ संक्रमितको मृत्यु ४ दिन पहिले
कालीगण्डकीमा आएको बाढीले सेतीवेणीका ८ घर डुबानमा ४ दिन पहिले
हेलम्बुका बाढीपीडित ४० घरपरिवारलाई राहत वितरण ५ घण्टा पहिले
सर्पको डसाइबाट एक बालिकाको मृत्यु २ दिन पहिले
चीनको फलाम खानीमा बाढी पस्दा ११ मजदुरको मृत्यु ४ दिन पहिले
बजेटमा मतदातालाई प्रभाव पर्ने कार्यक्रम नराख्न सरकारलाई पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुको आग्रह ३ हप्ता पहिले
गण्डकीमा ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाखको बजेट [ पूर्णपाठ ] ५ दिन पहिले
कांग्रेस वीपीले गणतन्त्र दिवसलाई कालो दिनको रूपमा मनाउने ३ हप्ता पहिले
निवृत्त कर्मचारीलाई निषेधाज्ञामा पेन्सन लिन सकस १ हप्ता पहिले
उदयपुरमा एटिएम फुटाउने युवक पक्राउ २ हप्ता पहिले
फरवार्ड लघुवित्तको संस्थापक शेयर असार ३ गतेदेखि लिलामीमा आउँदै १ हप्ता पहिले
कुवेतमा पुग्याे विश्वकप छनोट खेल खेल्न नेपाली टोली ३ हप्ता पहिले
ग्राण्डीमा एकैपटक ९६ जनाको परीक्षण गर्न मिल्ने पीसीआर ल्याब ३ हप्ता पहिले
भारतले विश्व समुदायलाई दियो दुई करोड २२ लाख खोप ४ महिना पहिले
परीक्षा दिएर गरिने पत्रकारिता १ वर्ष पहिले
घुस लिएको अभियोगमा सिडियो पक्राउ १ वर्ष पहिले
कोरोना संक्रमणबाट वीरगञ्जमा थप दुई जनाको मृत्यु १० महिना पहिले